Turkiga oo liifada u gaabiyey xiriirka diblumaasiyada ee kala dhaxeeyey Isra'il – SBC
Turkiga oo liifada u gaabiyey xiriirka diblumaasiyada ee kala dhaxeeyey Isra'il
Posted by editor on Siteenbar 2, 2011 Comments
Xukuumada Turkiga ayaa ku dhaqaaqday talaabo ay xiriirka dhanka diblumaasiyada ee ay la laheyd Isra’il ay liifada ugu gaabinayo, isla markaana waxaa laga eryey caasimad Turkiga danjirihii Isra’il & diblumaasiyiin sar sar.
Go’aanka xukuumada Turkigu ay qaadatey ayaa ah mid ka dhashay caro Turkigu uu ka qaaday Isra’il oo dhageha ka fureysatey madaxana ka ruxday inay raaligalin ka bixiso falkii ay ku xasuuqdey dad Turkish u badnaa oo ay ku leysay bishii May ee sanadkii hore Dooni sidey gargaar oo ka shiraacatey dalka Turkiga.
Xukuumada Turkigu waxay ku gaartey go’aan inay dalkeeda baaqi ku sii ahaan karaan ergo diblumaasiyadeed oo heer hoose ah, iyadoo loo qabtey diblumaasiyiinta kale oo uu ku jiro safiirku inay ugu dambeyn maalinta arbacada isaga baxaan dalka Turkiga.
Talaabadani waxay ku soo aadayaa iyadoo qaramada midoobay ay maanta daaha ka qaadayso natiijada ka soo baxdey baaris socotey mudo oo ku saleysan eeda xasuuqii ka dhacay markabka Mavi Marmara ee Turkiga laga lahaa oo ay naftooda ku waayen 9 qof oo ka mid ah dadka u olaleeya taageerada Falastiin.
Wargeyska New York Times oo si hoose loogu soo dusiyey nuxurka qoraalka baaritaanka ee maanta shaaca laga qaadayo ayaa sheegay in natiijada baaritaanka ay muujinayso in la cambaareeyo weerarka Isra’il, laakiin ducumentigu wuxuu dhigayaa in xayiraada ciidamada badda ee Isra’il ay tahay mid sharci ah oo la xiriirta xaqiijinta amaanka.
Turkigu waxay ka caroodeen Isra’il oo raaligalin ka biyo diidan, waxayna u arkaan xayiraada Yuhuuda ee Gaza taasi oo ay arkaan mid aan sharci aheyn.
Isra’il waxay muujisay in dhankeeda ay aad uga xun tahay in dad naftoodu ku waayeen hawlgalkaasi waxayse ku tilmaamtey talaabada xayiraada mid sharci ah oo ay ku difaacayso muwaadiniinteeda.
“Waa xiligii ay Isra’il guran laheyd miraha ka dhashay talaabada aan sharciga aheyn ee ay ku dhaqaaqeen ee ka baxsan xeerka caalamiga ah, isla markaana ay iska indho tirayso qodobada aasaasiga ah ee aadmiga, waana mid qiime weyn ugu fariisan doonta” sidaasi waxaa kaga dhawaaqay magaalada Ankara wasiirka arimaha dibada Turkiga Ahmet Davutoglu.
Ahmet Davutoglu oo shir jaraa’id maanta qabtey wuxuu sheegay in Isra’il ay weynayso saaxiibtinimadii Turkiga taasina ay qiime weyn ugu kici doonto.
Turkiga wuxuu xiriir adag oo dhanka dibmulaasiyada & military-ga uu la lahaa Isra’il iyadoo sanooyin fara badan labada ciidan ee Isra’il & Turkiga ay wadajir u sameyn jireen carbis dhanka military-ga ah,